Code de la Santé : Nahemotra ny fandinihan'ny solombavambahoaka ilay tolo-dalana naroson'i Voninahitsy Jean Eugène
jeudi, 04 novembre 2021 19:59
Androany 04 novambra 2021 no nodinihan’ny Solombavambahoaka tamin’ny fivoriambe azon’ny besinimaro atrehina ny tolo-dalàna laharana faha-003-2021/Pl manova sy mameno ny andininy sasany amin'ny Lalàna laharana faha 2011-002 momba ny Fahasalamana na "Code de la Santé" natolotry ny depiote Voninahitsy Jean Eugène, voafidy tao Morafenobe.
Rehefa niady hevitra nandritra ny adin’ny telo ireo Solombavambahoaka mahakasika ny tokony hitsaharan’ny asan’ny « Dépôt de médicaments » rehefa misy Farmasia eny amin’ny 10 km manodidina azy dia tapaka fa ahemotra ny fandinihana ity tolo-dalàna ity noho ny fahitana fa mbola mila fifampidinihana lalindalina kokoa izany mba ho tombotsoan’ny rehetra.
Marihina fa nitaky ny fampiatoana ny fandinihan’ny Antenimieram-pirenena ity tolo-dalàna momba ny toby fivarotam-panafody ity ny Holafitry ny Farmasia.
Nambaran'ireo mpiantsehatra eo amin’ny tontolon’ny Farmasia (Farmasianina sy mpamongady) fa ny fanovàna andininy iray monja ao amin’ny Fehezan-dalàna momba ny Fahasalamana dia manimba ny fifandrohizan’ireo andininy samihafa ao aminy izay natao indrindra ifameno.
Ny fanajana ireo fepetra fototra mifehy ny antom-pisian’ny Farmasia no tandrovanay azy, hoy izy ireo, ho tombontsoan’ny marary, dia ny kalitaon’ny fanafody, ny fisiany, ny fahazoan’ny olona mividy azy, ary ny fampiasana ny fanafody araka ny fepetra voafaritra.